Banyere Anyị - Guangzhou MCM Asambodo ＆ Testing Co., Ltd.
Opekempe Jikọọ na Nke kachasị
MCM na-arapara n'usoro mmepe nke obere ụlọ ọrụ kwesịrị ịnọgide na-emeziwanye ma na-ewulite ike iji mechaa buru ibu ma ghara ịnụ ọkụ n'obi maka mmeri ọsọ ọsọ. MCM na-ejide nkwekọrịta ya ma na-elekwasị anya n'inye ule na asambodo ọrụ maka ngwaahịa batrị dị iche iche n'ụzọ kwụ ọtọ. Naanị otu a ka MCM nwere ike ịbụ maka ndị ahịa ya ma nyekwa nnukwu azịza n'ụzọ na-adịgide adịgide.
MCM NA NTI
Guangzhou MCM asambodo & ule ụlọ ọrụ, gụnyere nke a multidisciplinary otu ndị a ma ama maka inye ọrụ ọnụego mbụ na ule ngwaahịa batrị zuru ụwa ọnụ na asambodo. Dị ka otu n'ime ndị ọkachamara ọkachamara nke onwe nke atọ na mpaghara ule ngwaahịa batrị, CNAS, CMA, CBTL, CTIA kwadoro anyị site na usoro njikwa njikwa ISO / IEC 17025 & 17020.
IHE MCM na-eweta
Mgbochi nke MCM
Okwu a niile dị mma na mbụ, mana ole na ole gosipụtara na ha dị n'ikpeazụ, nke e hotara na The Book of Songs, akwụkwọ ndị China chịkọtara oge ochie, bụ nkwenye nke ndị otu MCM kemgbe ọ malitere na 2003. Nkwenkwe a bụ na-akpali anyị itinyekwu uche n'etiti ndị ọgbọ. MCM rapara na ọnọdụ ọrụ nke na-eme ka ọ dịwanye mma ma na-esikwu ike, yana ịnọgide na-agbanwe agbanwe. MCM na-eju ndị ahịa anya mgbe niile n'ihe niile. Ọzọkwa, MCM ga-eji akọ na uche jeere azụmahịa ọ bụla dabere na mkpa ndị ahịa, na-enye ọrụ dị elu maka mgbasa azụmahịa zuru ụwa ọnụ.